प्लेन चार्टर गरेर जन्ती लैजानुको निकै घत लाग्दो उद्देश्य ! - PUBLICAAWAJ
प्लेन चार्टर गरेर जन्ती लैजानुको निकै घत लाग्दो उद्देश्य !
प्रकाशित : शुक्रबार, चैत ०१, २०७५१५:३३ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
काठमाडौँ, धनकुटा निवासी एक किशानले आफ्नो छोराको विवाहमा दुई वटा हवाईजहाज चार्टर गरेर ६९ जन्ती लिएर गएका छन् । झट्ट सुन्दा घमण्ड जस्तो लाग्ने यो कुरा साच्चै घत लाग्दो छ ।
महालक्ष्मी नगरपालिका ९ का नगेन्द्र थापा एक सामान्य किसान हुन् । एक सामान्य किसानले प्लेन नै चार्टर गरेर जन्ती ल्याउनुमा उनको उद्देश्य गाउँका जयेष्ठ नागरिकलाई काठमाडौँ भ्रमण गराउनु थियो । उनि भन्छन्, ‘ ज्येष्ठ नागरिकलाई काठमाडौँ भ्रमण गराउने मुख्य उद्देश्यले जन्तीको रूपमा प्लेन चार्टर गरेर लगेको हुँ । छोराको जन्ती भएर गाउँघरका अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक भ्रमण गराउन पाएकोमा खुसी लागेको छ।’
६९ जन्ती मध्ये ४० को त यो पहिलो काठमाडौँ भ्रमण थियो । गाउँका बुडापाकालाई यसरी काठमाडौँ घुमाउनु ठुलो रहर रहेको बताउँछन् अलैंची खेती र व्यावसायिक पशुपालन गर्दै आएका उक्त किसान । उनका छोरा दिनेश थापा हाल सुनसरी टेक्निकल कलेजमा फार्मेसीमा एमएस्सी गर्दै छन् ।
दिनेशको विवाह काठमाण्डौ ठमेल निवासी प्रज्ञा सुवेदीसँग हिन्दू परम्परा अनुसार भव्य रुपमा सम्पन्न भइसकेको छ । प्लेनमा जन्ती आवत जावत र विराटनगर देखि धनकुटा गाडीमा आवत जावत गर्दा झन्डै ७ लाख ५० हजार खर्च भएको किसान थापाले बताएका छन् ।
अनुमतिबिना सञ्चालन क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन
बाँडेरै सकियो भरतपुर अस्पतालको जग्गा,भबन बनाउने ठाउँ छैन
ट्याक्टरको टायरले च्याप्दा सहचालक मृत्यु